Umshini Wokugcwalisa Izimonyo - Micvd.com
Emhlabeni wethu ohamba ngokushesha, izinto ezintsha zinqoba imakethe nsuku zonke. Amakha, okhilimu, amagiya, ama-mascara ne-lip gloss. Imishini yokugcwalisa nokubopha uphawu evela NPACK kahle lokhu okuhlukahlukene.
Okhilimu bokugcoba, ijeli lezinwele, okokugcoba, izinyo lokuqaqamba kwamazinyo, izihlahlana, noma okokugcoba komzimba; sinikeza izixazululo zokugcina noma yiluphi uhlobo lomkhiqizo wezimonyo kunoma yiluphi uhlobo lwesitsha
Izidingo zokupakisha izimonyo zingahlukahluka kakhulu ngakho-ke sinikeza izixazululo eziningana zokupakisha zotshwala kanye nezithunga. Sizokunikeza ngemishini ephelele yezimonyo yezidingo zakho noma ngabe lokho kungumshini wepiston noma we-auger. Ungathola umshini wokugcwalisa wekhwalithi osezingeni eliphezulu ukugcwalisa izimbiza, imishanguzo, amabhodlela epolishi wezipikili, okokukhiqiza noma yisiphi isitsha.
Imikhiqizo ihlukahlukene nje njengokufakelwa okufika kuyo. Kwimidiya ye-liquid noma ye-viscous, sinikeza ubuchwepheshe obusha futhi sihlangabezane nezinselelo ezizayo ngemibono emisha nokuhlaziywa kwezobuchwepheshe. Lokhu kuphumela emugqeni ogcwele wemikhiqizo esihlinzeka namuhla. Kusuka dosing, ukugcwaliswa kanye uphawu ehlanganwe umhlangano wezinhlelo eziyinkimbinkimbi zokufaka, kufaka phakathi izixazululo ze-turnkey.
Imishini yethu iyisisombululo esiphelele sokugcwalisa imikhiqizo yezimonyo ibe yinto ejwayelekile kanye nobumba bezinqola. Imishini esinikezela ngayo ukugcwalisa imikhiqizo yezimonyo kulula ukuyicoca, iguquguquke, isheshe, futhi ngaphezu kwakho konke okwenziwe ngezinto ezilungele ukucubungula noma yiluphi uhlobo lomkhiqizo wezimonyo. Ukusuka ekugcwaliseni, ekuhlanganeni, nasekubhaleni amalebula: imishini yethu iyaqhubeka nokuhlangabezana nomkhakha wokunakekelwa kwezimonyo owenzelwe njalo.
Njengoba imboni yezimonyo ishintsha ngokushesha, sisebenza kanzima ukudala imishini yezimonyo engakwazi ukuhlalisa iziqukathi zezimo nobukhulu obuhlukahlukene. Bangakwazi futhi ukuphatha imikhiqizo enamazinga ahlukahlukeneko okubukelwa. Akunandaba ukuthi ukuvumelana komkhiqizo wakho kuyini, sizokuthola isisombululo esifanele.
Faka Uhlelo Oluphelele Lokugcwalisa Izinto Zokuhlobisa
Imikhiqizo yezimonyo inamazinga ahlukahlukene okubonwa, yingakho kufanele uqiniseke ukuthi ufaka imishini efanelekile yokugcwalisa uketshezi esikhungweni sakho ukuze uthole imiphumela oyifunayo. Ama-filler ngokweqile, ama-piston fillers, ama-filler filimbi, kanye namafilimu wegrafu atholakalayo ngokuya nge-viscosity. Noma ngabe unomhlangano wama-gels, o-lotion, owokugcoba, owokugcoba, okhilimu, noma ezinye izinhlobo zezimonyo eziwuketshezi, sinezinto zokugcwalisa izimonyo ezingaphatha le mikhiqizo futhi zigcine umugqa wakho wokukhiqiza uhambe kahle.
Ngemuva kwenqubo yokugcwalisa uketshezi, ezinye izinhlobo zemishini zingalawula kahle inqubo yokufaka yonke indlela kuze kube ziyaphela. Imishini yokufaka ikhophi ingafaka izembozo zobukhulu obuhlukahlukene nobukhulu kububanzi obuqukethe iziqukathi, amalebula angafaka amalebula asezingeni eliphakeme ngesithombe esenziwe ngokwezifiso nangombhalo, futhi abagibeli bangadlulisa imikhiqizo ngesivinini esihlukile phakathi kweziteshi.
Dizayina umugqa wenkambiso yokukhiqiza yezimonyo
Ukuhlangabezana nezidingo ezithile zohlelo lwakho lokusebenza, singakusiza ukuklama isistimu eyenziwe ngezifiso yemishini yokugcwalisa izimonyo. Khetha kusuka kumasayizi ahlukahlukene nokulungiselela ukwengeza inqubo yokufaka ye-liquid, ngosizo lomunye wochwepheshe bethu bokufaka. Futhi singakusiza ukuthi ufake umugqa wakho wokugcwalisa uketshezi olusezingeni eliphezulu futhi usihlole ukuze uqiniseke ukuthi uyakwazi ukukunikeza imiphumela ofuna ukuyibona.
Uma ufuna ukuqala ekwakhiweni nasekusebenzisweni kwemishini yokugcwalisa yezimonyo ngokwezifiso, khuluma nomunye wabasebenzi abanolwazi at NPACK. Singasiza ekuqinisekiseni ukuthi umugqa wakho wokukhiqiza unikezela ngeminyaka yenkonzo ephezulu, nengozi encane yokuqhekeka kwezinkinga zemishini. Kanye nemishini ethembekile yokugcwalisa uketshezi, futhi sinikezela ngezinsizakalo ezingeziwe kubandakanya ukufaka, ukuqasha, kanye nensimu yasensimini. Siphinde futhi sinikeze nezinsizakalo zekhamera enejubane eliphezulu, ezinganikeza ukubhekisisa ukusebenza futhi zisize ekuboneni ukuthi yiziphi izinyathelo ongazithatha ukuthuthukisa ukusebenza kwemishini yakho.
Umshini Wokugcwalisa I-Shampoo & Cream & Lotion
Umshini wokugcwalisa umshini wokugcwalisa we-shampoo we-NP-VF wenziwe kahle futhi wakhiqizwa yi-shanghai npack automation Equipment co., Ltd. Kusebenza kakhulu ukugcwalisa i-viscous liquid, njengemikhiqizo yezimonyo, imikhiqizo yamakhemikhali yansuku zonke, njenge-shampoo, ukhilimu, ilayisi nokunye.
Amathangi aphezulu we-liquid angaxhuma nethangi lokulondolozwa kwenqwaba yamakhasimende ukuze afinyelele uketshezi lokondla oluzenzakalelayo.
Ukulethwa komkhiqizo kusuka kuthangi lakho ngobuningi kuya emaphayipini kungalungiswa ngethangi le-buffer lisebenzisa i-float sensing-sensing, a manifolded nge-ngqo, noma izindlela zokuphinda usebenzise.
Umshini wokugcwalisa i-piston piston othomathikhi we-NP-VF wenziwa ngohlaka lwe-304 SS futhi uyakwazi ukuxhasa u-1 kuya ku-20 ukugcwalisa ama-nozzles. Ukulawulwa kwe-PLC, isikrini sokuthinta, izingxenye zokuxhumana zebanga lokudla, insimbi engagqwali nokwakhiwa kwe-aluminium anodised, nezinye izici eziningi ziza ngokujwayelekile.
Umshini wokugcwalisa i-shampoo ozenzakalelayo we-NP-VF
Uhlobo lwelayini lunokuguquguqulwa ngezinhlobo eziningi ezahlukene zamabhodlela
Umshini wokugcwalisa we-Viscosity Liquid Machine
Umshini wokugcwalisa we-LiPid we-NP-VF-1 othomathikhi wenzelwa ngokukhethekile futhi wakhelwe isisekelo ku-NP-VF, Kusebenza kakhulu ukugcwalisa i-viscous liquid, njengemikhiqizo yezimonyo, imikhiqizo yamakhemikhali yansuku zonke.
Umshini wokugcwalisa uketshezi oluzwelayo lwe-NP-VF-1
Ukugcwaliswa kwama-nozzles avimbekile kungamaconsi e-anti, usilika, ne-auto cut viscous liquid
Umshini wokugcwalisa u-Liquid Firm Machine we-NP-EVF
Umshini wokugcwalisa ugesi we-NP-EVF Umshini wokugcwalisa uketshezi oluzenzakalelayo unguklami esisekelweni se-NP-VF, futhi uyi-filler eguquguqukayo ngokwedlulele ekwazi ukugcwalisa ngokunembile futhi ngokushesha futhi kube mncane nokuphakathi okuphakathi kwe-viscosity.
The NPACK automatic linear piston filler yenziwe ngefreyimu yensimbi engagqwali engu-304 futhi iyakwazi ukuxhasa 2 kuya ku-4 ukugcwalisa ama-nozzles PLC Controls, isikrini sokuthinta, izingxenye zokuxhumana zebanga lokudla, insimbi engenasici nokwakhiwa kwe-aluminium ye-anodized, kanye nezinye izici eziningi eziza standard.
Ingeza ukusebenza kahle kunoma yimuphi umugqa wokukhiqiza osetshenziselwa izimonyo, imboni yokudla, amakhemikhali akhethekile, ezemithi, nezimboni zokunakekela umuntu. Izinketho ezingeziwe zitholakala ezindaweni zokuhlanzeka, eziyingozi, ezivuthayo kanye nokugqwala
Akukho ibhodlela, akukho ukugcwaliswa, ukulawula kwe-PLC
Ivolumu yokugcwalisa okulungile, ngaphakathi ± 1% kanye ne-counter counter bottle.
Umlomo webhodlela ungatholakala
Izinto zokwakha ezijwayelekile: 304SS
Izinombolo zokugcwalisa ama-nozzles: ama-nozzles angama-2-ukugcwalisa
Amandla ajwayelekile: 220V, 50 / 60HZ, isigaba esisodwa noma i-380V, i-50 / 60Hz
Isilinganiselo nesisindo: ngokuya kokumiswa kwemodeli nemikhiqizo yamakhasimende
1 Speed I-10-30bottles / iminithi
2 Uhlu lokugcwalisa 100-1000ml,350-2500ml,500-5000ml
3 Ukulinganisa isilinganiso ± 1%
4 Amandla okusebenza I-220VAC
5 Air ingcindezi 6 ~ 8㎏ / ㎝²
6 Ukusetshenziswa komoya 1m³ / iminithi
7 Isilinganiso samandla 0.8kw
8 Amanye amadivayisi amandla wezinga 7.5kw （i-compressor yomoya）
9 isisindo Net 320Kg